Doorashadii Oo Dhawr Bilood Ka Hadheen Iyo Baarlamaanka Somaliland Oo 10-sanno Ku Guul Daraystay Samaynta Xeerkii Dib Loogu Soo Dooran Lahaa - Wargane News
Home Somali News Doorashadii Oo Dhawr Bilood Ka Hadheen Iyo Baarlamaanka Somaliland Oo 10-sanno Ku...
Doorashooyinka Somaliland ayay qabsoomidooda ka hadhsan yihiin afar bilood iyo ayaamo, waxayna doorashooyinkaasi kala yihiin doorashada Madaxweynaha iyo ta Baarlamaanka, oo labadaba loo asteeyay 26-June sannadkan, waxaana in muddadaasi la qabto cod aqlabiyad ah ku ansixiyey Golaha Wakiilada Somaliland.
Balse Golaha Wakiilada oo uu hoggaamiyo Guddoomiyaha Xisbiga WADANI, Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) waxay ku guul daraysteen inay sameeyaan xeerkii Golaha dib loogu soo dooran lahaa, maadaama xeerkii Doorashadii 2005, lagu soo doortay ahaa mid ku eekaa markaas oo kaliya.
Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI, ahna Guddoomiyaha Golaha Wakiilada iyo Xildhibaanada uu hoggaamiyo waxay muddo 10-sanno ah oo ay kuraasta ku fadhiyeen ku guul daraysteen samaynta xeerkaas. Ilaa haddana Koomiishanku waxay la cadilan yihiin oo aan gacanta ugu jirin wax xeer ah oo Golaha Wakiilada ay doorashooyinkooda ku qaban karaan. Golaha Wakiilada Somaliland, oo xilka loo doortay Badhtamaha bishii Sagaalad ee 2005, waxay muddadaas haysteen wakhti ku filan oo ay xeerkaas iyo xeerar kale ku samayn kari lahayeen.
Hasa-yeeshee, arrinta la yaabka leh ayaa ah in haddana Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI iyo Xildhibaanada Xisbigaas Golaha ugu jira ay Xukuumadda ku dhaliilaan inay muddo kordhin doonayso. Masuuliyiin Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ka tirsan oo dhawr jeer ka hadlay qabsoomidda doorashooyinka waxay ku celceliyeen inay Xukuumaddu diyaarisay dhammaan qodobadii iyaga looga baahna, sida Magacaabista Koomiishanka Doorashooyinka, Diyaarinta Lacagta qabsoomida Doorashooyinka, wax iyaga ku baaqdayna aanay jirin.
Qodobka kaliya ee Qabsoomida doorashada caqabada ku ah ayaa ah, Xeerka Golaha Wakiilada laga sugaayo ilaa hadda, marka laga reebo Diwaangalinta Codbixiyaasha oo wali ku maqan Deeqbixiyaasha iyo Shirkadihii Qandaraaska ku qaatay.